Izindatshana zika-Ajoy Krishnamoorthy Martech Zone
Imibhalo nge Ajoy Krishnamoorthy
Abaholi bezokumaketha nokuthengisa bayizinto ezibalulekile ekushayeleni imali engenayo yenkampani. Umnyango wezokumaketha ubamba iqhaza elibalulekile ekuqhakambiseni ibhizinisi, ukunikela ngemininingwane yalo, nokusungula abahlukanisi balo. Ukumaketha futhi kudala intshisekelo kumkhiqizo futhi kudale ukuhola noma amathemba. Ekhonsathini, amaqembu okuthengisa agxila ekuguquleni amathemba kumakhasimende akhokhelayo. Imisebenzi ihlangene futhi ibaluleke kakhulu empumelelweni yebhizinisi jikelele. Njengoba kunikezwe umthelela wokuthengisa nokumaketha on the